musha/Hyperbaric Oxygen Therapy Risks - Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT
Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT Njodzi
Chii Hyperbaric Oxygen Therapy? HBOT ndiyo inorayirwa kurapwa inogamuchirwa neCDA uye AMA umo murwere anofemera 100% yepamusoro yehutano oksijeni apo kushandiswa kwekamuri yekurapa kunowedzera kusvika pane imwe yakakwirira kupfuura gungwa rekumanikidza. Izvi zvinobatsira kukurumidza nekuvandudza simba remuviri wekuporesa. HBOT yakachengeteka, inorwadza, isina-invasive alternative uye / kana adjunctive therapy. Kazhinji, hapana zvinetso zvakakomba zvinosanganiswa neHyperbaric Oxygen Therapy, asi zvimwe zvinetso kana migumisiro inogona kunge yakabatana nemamiriro ekutanga akabatwa.
Ear Barotrauma - Kuoma nekubvisa nzeve kunokonzera "popping" uye kunogona kukonzera marwadzo kusvika pamwero. Pakati nzeve barotrauma ndiyo inonyanya kushanda nayo yeHBOT therapy. Murwere anorambidza barotrauma nekubvisa nzeve dzavo (kuenzana) munguva yekamuri yemakamuri uye kukwira. Nhamba dzinoverengeka dzemagetsi ekufambisa kwemhepo inogona kushandiswa, kana, tympanotomy tubes inogona kushandiswa kune avo vasingakwanisi kuisa auto.
Sinus Pain, Upper Respiratory Infections uye Chronic Sinusitis - Sinasi inonyanya kuonekwa inowanzoonekwa shoma pane yepakati yepauti barotrauma. Antihistamines, decongestants, uye / kana nasal spray inogona kushandiswa vasati vapinda mukamuri. Nekuderera kunononoka uye kudzvinyirira, kazhinji kune matambudziko.
Myopia uye Cataract - Myopia inopesana nekudzokorora kwekudzokidzwa zvakare kune HBOT. Apo myopia inofambira mberi inowanikwa panguva dzakatevedzana dzehutano hweHBOT, mushure mokupera kwemishonga, maziso anooneka anochinja zvachose. Kuwedzereka kwekukura mumatara akange aripo ndezvakaoma zvekusingaperi kusingagumi kwenguva refu pamatambudziko pamusoro pe2 ATA. Nyaya dzakadhindwa pamwe chete uye zvakakura zvechipatara zvakaitika zvinoratidza kuti cataract itsva haidzire mukati mechikamu che30 kune 50 mishonga inowanzoshandiswa muU.SA.
Pulmonary - Chirongwa chepulmonary uye neurological ye oksijeni chepfu inowanzotaurwa nezvekunyanya kunetseka neHBOT. Oxygen kuvhiringidza mitemo inodzivisa kuti zviratidzo izvi zvinyatsorondedzerwa kuti zvinoramba zvichiratidzwa kuvanhu vanogara. Zviratidzo zvepulmonary hazvibudiswi nekusvibiswa kwezuva nezuva kune oksijeni pa2.0 kana 2.4 ATA ye2 kana maawa 1.5. Chiitiko che okisijeni chinokonzera kana kushandiswa kwakadaro kune 1 ne 10,000 mishonga yekurapa. Kunyangwe kana okisijeni kudengenyeka kuchiitika, hapana maitiro anoramba aripo kana kugadzikana kwemagetsi kunogona kudziviswa. Varwere vane kugadziriswa kwemhepo kune ngozi yakawanda yepatmonary barotrauma munguva yekudzvinyirira. Pulmonary barotrauma panguva yekudzvinyirira haigoni.
Kusapomerwa Pneumothorax - Icho chete chinopesana neHBOT chisina kutorwa pneumothorax. Kugadziriswa kwepneumothorax pamberi peHBOT kurapwa, kana zvichibvira, kunobvisa chigadziro kurapwa. A X-ray Chest ingave yakakosha kuti ibvise pneumothorax, kana nhoroondo yezvechiremba inosanganisira: 1) Nhoroondo yepneumothorax yepamusoro; 2) Nhoroondo yekuvhiyiwa kwechiedza; kana 3) Chiitiko chekuvadzwa kwechipfuva. Pneumothorax is complication, iyo inogona kukonzerwa nekufema kubata panguva yekudzvinyirira.
Oxygen Kugumburwa - Kuitika kwekugumburwa kunobudiswa mu 0.01% yemishonga ye 28,700 uye haina kumbobvira ichinyorwa pasi pe2.0 ATA kweawa kana kuti pasi. Refer; Davis (1989) akaongorora varwere ve1505 avo vaibatwa pakati peC1979 ne1987 uye vakawana masangano maviri eawa 52,758. Oxygen Kushungurudzika kwakaitika mune varwere ve 5 chete, (0.009%) vose avo vakapora zvakakwana.
Claustrophobia - Claustrophobia, iyo inoratidzika kuvapo mune 2% yevanhu vazhinji, inogona kuita kuti tive nehuwandu hwekuvharirwa. Kunyaradza kuderera kunogona kurongerwa kune avo varwere vane hanya.
Dental - Basa rose remazino, midzi midzi, uye kuzadza kunofanira kunge kwakakwana. Dental barotrauma hazviiti. Varwere havafanire kugamuchira kurapwa kana vane mazamu emakemikari kwenguva pfupi kana midzi isina kupera.
Textbook yeHyperbaric Medicine, KK Jain, MD, Vol. 1, 2, 3
Hyperbaric Practice Medicine Practice, Eric Kindwall, MD
Kuchengetwa kwevarwere Kuwana Hyperbaric Oxygen Therapy, Bhuku reMwoyo Murefu Maitiro. 1988 Norkool, D
Hyperbaric Oxygen Therapy: Komiti Yenyaya 1999. UHMS
Fitness kusvika Dive. DAN (Divers Alert Network)
NBDHMT (National Board of Diving uye Hyperbaric Medical Technology)